အကောင်းဆုံးစပိန် Linux distros များ Linux မှ
လအနည်းငယ်အကြာကျွန်တော်တစ် ဦး ရွေးချယ်ရေးဖန်ဆင်းတော်မူ၏ အကောင်းဆုံး argentine Linux ကို distros။ ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှတသောပထဝီဝင်ဆိုင်ရာဖြန့်ဝေမှု၊ နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ စနစ်၏အရည်အသွေးနှင့်ပြီးစီးမှု၊ ၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းအရွယ်အစားစသည်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ အကောင်းဆုံးစပိန် Linux distros များကိုရွေးချယ်လိုက်သည်။
1 ထရစ်စ် (ဂလီစီယာ)
4 လီယာရက်စ် (ဗလင်စီယာ)
5 ဂွာဒါလင်းနစ် (အန်ဒလူးစီယာ)
7 MAX (မက်ဒရစ်)
8 လင်ကက်တ (Catalonia)
Trisquel GNU / Linux ဆိုတာ Linux-libre kernel ကိုသုံးတဲ့ GNU operating system ဗားရှင်းဖြစ်တယ်။ စီမံကိန်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာကောင်းမွန်သောဘာသာစကားအထောက်အပံ့ဖြင့်လုံးဝအခမဲ့အသုံးပြုရန်၊ ပြီးပြည့်စုံသောလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ကက်တလန်၊ Basque၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊
တရားဝင် site: http://trisquel.info/
MoLinux သည် Castilla-La Mancha Community Board ၏တရားဝင် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ MoLinux ကို Ubuntu ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီ၏အမည်များသည် Miguel de Cervantes ၏ "တီထွင်ဆန်းသစ်သော hidalgo Don Quixote de la Mancha" ဝတ္ထုမှဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။
အနည်းငယ်မျှသောဗားရှင်းလည်းရှိသေးသည်။ Molinux Zero သည် Puppy Linux 4.2 ကိုအခြေခံထားပြီး 166Mhz ပရိုဆက်ဆာ၊ 32Mb Ram + Swap (64Mb အကြံပြုသည်), CDROM + 20x drive နှင့် hard disk ကိုတင်ထားသည်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များထဲတွင်၎င်းတွင် live version ရှိပြီး USB, Zip နှင့် Hard Drives တွင်အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
တရားဝင် site: http://www.bilib.es/recursos/molinux/
ASLinux Desktop ကို 32-bit Intel နှင့် AMD CPU များအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောတည်ငြိမ်။ အလိုအလျောက်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Linux ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီးသုံးစွဲသူတောင်းဆိုနိုင်သောအင်္ဂါရပ်များ - ရုံးအလိုအလျောက်၊ အင်တာနက်၊ မာလ်တီမီဒီယာ၊ ပညာရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး firewall၊ Windows virus scanner နှင့် spam filter စသည့်လုံခြုံရေးစနစ်များနှင့်အတူစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ASLinux Desktop သည် Linux ၏အားသာချက်နှင့်တည်ငြိမ်မှု၊ Debian Sarge ၏စွမ်းအားနှင့်ဘက်စုံသုံးမှု၊ KDE ၏ဖော်ရွေမှုနှင့်လွယ်ကူမှုတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်း၏အားသာချက်မှာ၎င်းကိုအလွန်အသုံးဝင်သည်။
ASLinux Desktop ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည် ။.1 ဗားရှင်း 2.0 အထိဗားရှင်းထုတ်ဝေသည်။ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ စာရွက်စာတမ်းနှင့်အပိုဆော့ဖ်ဝဲဒေါင်းလုပ်ကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူအတွက်အဆင့်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုများအဖြစ်အပိုဆောင်းစီးရီးအဖြစ်ကမ်းလှမ်းသည်။ ။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးသည်လက်ရှိသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
တရားဝင် site: http://www.activasistemas.com/index.php?id=7
Generalitat Valenciana ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်သောရည်ရွယ်ချက်မှာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအခြေခံသည့်ဗလာန်စီယန်အသိုင်းအဝိုင်း၏ပညာရေးစနစ်အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ LliureX သည် Ubuntu ကိုအခြေခံသည်။ သို့သော်ယခင်ဗားရှင်းများသည် Debian ကိုအခြေခံသည်။
၎င်းသည် Valencian Community ၏တွဲဖက်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြစ်သော Valencian နှင့် Spanish နှင့်ပုံစံနှစ်ခုဖြင့် - ကို install လုပ်ရန်နှင့်သီးခြား CD (LiveCD) အနေဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်။
တရားဝင် site: http://lliurex.net/home/
Guadalinex သည်လွတ်လပ်သောဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုမှုကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုင်းအဝိုင်းတွင်မြှင့်တင်ရန် Junta de Andalucíaမှအားပေးသည့် Linux ဖြန့်ချိခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Junta de Extremadura မှအလားတူစီမံကိန်း GnuLinEx မှလှုံ့ဆော်သည်။ Junta de Andalucíaနှင့် Extremadura တို့အကြားကန ဦး သဘောတူညီမှုကြောင့်မူလက Debian GNU / Linux ကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး version 3.0 ကတည်းက Ubuntu ကိုအခြေခံသည်။
တရားဝင် site: http://www.guadalinex.org/
gnuLinEx သည် Debian GNU / Linux နှင့် GNOME ကိုအခြေခံပြီးအခမဲ့ Linux ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး OpenOffice.org သည်ရုံးသုံး suite တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းကိုစီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ၀ န်ကြီးဌာန Extremadura (စပိန်) ၀ န်ကြီးဌာနကရှေ့ဆောင်ဖြစ်ပြီးစပိန်၏ကျန်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများကထောက်ပံ့သည်။ အချိန်အတော်အတန်ကြာအောင် Extremadura အသိုင်းအဝိုင်းသည်ကျောင်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးစသည်တို့တွင်ပွင့်လင်းသောဖြေရှင်းမှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် (Guadalinex ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် GnuLinex မှမှုတ်သွင်းခဲ့သော) Andalusian အသိုင်းအဝိုင်းအားလည်းပံ့ပိုးမှုပေးခဲ့သည်။
တရားဝင် site: http://linex.gobex.es/
MAX သို့မဟုတ် MAdrid_LinuX သည်မက်ဒီဒရစ်အသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှဖန်တီးခဲ့သော Ubuntu (Debian GNU / Linux ကိုအခြေခံသည်) ကိုအခြေခံသည့် operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗားရှင်း ၂ မတိုင်မှီ Debian GNU / Linux ကို အခြေခံ၍ တိုက်ရိုက် CD ဖြန့်ဖြူးသည့် Knoppix ကိုအခြေခံသည်။
၎င်း operating system ကို LiveDVD mode တွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး hard disk တွင်လည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ MAX ဖြန့်ဖြူးမှုကိုမက်ဒရစ်ဒေသပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှတက္ကသိုလ်မဟုတ်သောပညာရေးစင်တာများတွင်တပ်ဆင်ထားသောကွန်ပျူတာများအားလုံးတွင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
၎င်းသည် CD သို့မဟုတ် DVD ပုံရိပ်များ ISO မှတဆင့်ဖြန့်ဝေသည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းပါ ၀ င်သည့် disk တွင် client နှင့် server ဗားရှင်းများကိုထည့်သွင်းရန်နှင့် USB portable memory ပေါ်တွင်အနည်းဆုံး bootable installation ကိုအသုံးပြုသောသုံးဆထည့်သွင်းခြင်း option ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုးစက်များပေါ်တွင်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ application များကိုထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည့်စနစ်လည်းရှိသည်။
တရားဝင် site: http://www.educa2.madrid.org/web/max?c=an
Linkat သည် Catalonia ၏ Generalitat ၏ပညာရေးဌာန၏ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် OpenSUSE ဖြန့်ဖြူးခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ပရိုဂရမ်များ၏လည်ပတ်မှုသည် rpm package ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ KDE နှင့် XFCE enviroments များလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်လက်ရှိအဆင့် ၃ တွင်ရှိပြီး Gnome desktop environment ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
တရားဝင် site: http://linkat.xtec.cat/portal/index.php
အခြားကောင်းသော distros များမှာ - ကာဒမာ y Bardinux.
မှတ်ချက် - စာရင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ် Catix, သြဂုတ်လ, gnUAMix, လာဇရု, LinEspa, LU3CM, Melinux နှင့်အခြားသူများကသူတို့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း updates များကိုခံကြပြီမဟုတ်သောကြောင့်။ စပိန်ဖြန့်ကျက်မှုအားလုံး၏ပြည့်စုံသောစာရင်းကိုကြည့်ရန်သင့်အားလည်ပတ်ရန်အကြံပေးလိုပါသည် ဝီကီပီးဒီးယား.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » အကောင်းဆုံးစပိန် Linux distros များ
kademar လွဲချော် http://www.kademar.org/ နှင့် Bardinux http://bardinux.ull.es/ အကယ်စင်စစ်ငါတို့တ ဦး တည်းထက်ပို။ ကျန်ရစ်၏။
ဟုတ်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာတာလန်တွေဟာစပိန်တွေဖြစ်တယ်၊ သူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်
Courage Thd သို့ပြန်သွားပါ
Francesc Llort ဟုသူကပြောသည်
မွမ်းမံခြင်း။ wheezy အပေါ်အခြေခံပြီး၎င်း၏ဗားရှင်း 1.7 နှင့်အတူCàtixသည်စာရင်းတွင်နောက်တဖန်ပါလိမ့်မည်။ အတော်လေးပြီးပြည့်စုံပြီးသား, သူ့တိုက်ရိုက် cd ကနေ။
စကားမစပ်, Catalans သို့မဟုတ်အခြားသူများဖြစ်ကြသည်သမျှ, သင်မကြိုက်ကြဘူးလျှင်ပင်, တစ် ဦး ချင်းစီဆုံးဖြတ်ကြကုန်အံ့။
Francesc Llort အားစာပြန်ပါ
ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအသိုင်းအဝိုင်းတိုင်းတွင်၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများမည်သည့် ၀ င်ထွက်မည်ကိုမဆိုအိမ်နီးချင်းများကဆုံးဖြတ်သည်။ မင်းဟာမဟုတ်ဘူး? ။ အကယ်၍ အာရာန်ချိုင့်ဝှမ်းသည်ကက်တလန်နီးယား၏လွတ်လပ်ရေးကိုလိုလားပါက၎င်းအားအာရာန်လူမျိုးစုတစ်ခုတည်းကသာဆုံးဖြတ်နိုင်သလားသို့မဟုတ်ကက်တလန်လူမျိုးများအားလုံးကယင်းကိုဆုံးဖြတ်မည်လော။
ဝင်ပေါက်ဟုတ်ကဲ့၊ ထွက်ပေါက်မရှိပါ၊ သို့မဟုတ်သင်အခြားရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ရန်ရပ်ရွာမှထွက်ခွာလိုပါကသင်ဆန္ဒမဲပေးရသောကြောင့်အိမ်နီးချင်းများကသင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။
Manuel Manrique ဟုသူကပြောသည်
Cartagena မှသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် linux များနှင့်လွတ်လပ်လိုသည်။
ဖြစ်လိမ့်မည်: CartaLinux ။
၎င်းသည် Murcilinux အပေါ်အခြေခံသည်
၎င်းမှာပုံမှန်ဘာသာစကားဖြစ်သော El Panocho ရှိသည်
manuel manrique အားပြန်ပြောပါ
Linuxknow ပါ ဟုသူကပြောသည်
Debian ညှစ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ စပိန်ဘာသာဖြင့်နောက်ထပ်ကောင်းသောအနှောက်အယှက်တစ်ခုလည်းရှိသည်။
ဟုတ်ကဲ့ ... အရမ်းကောင်းတယ် tb!
05/08/2011 23:18 တွင်« Disqus » <>
ထိုအ Antergos? ။ ရှေးဟောင်း Cinnarch ။
ငါသုံးနေတဲ့ distro Bugtraq ကိုသူ့ရဲ့ Black Widow version မှာပေးတယ်။ debian, ubuntu နှင့် open suse တို့ကိုအခြေခံသည်။ ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
ပြည်နယ်ဖြန့်ဝေမှုများအနေဖြင့်စပိန်အတွက်အဘယ်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုပေါင်းစည်း။ မပြုလုပ်သနည်း။ ကက်တလန်၊ စပိန်စသည့်ဘာသာစကားများကိုထောက်ပံ့ရန်၎င်းသည်မွေးစားခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြန့်ဝေမှုထိန်းသိမ်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Linkat အသုံးပြုသူအနေဖြင့်ယနေ့ငါသည်ဤ distro နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်သည်ဤနေရာတွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းနှင့်မတူကြောင်းပြောရန်လိုသည်။ ယနေ့တွင် Linkat သည် Ubuntu 12.04 LTS ကိုအခြေခံသည်။ အခြားအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ - Desktop environment သည် GNOME2ဖြစ်ပြီး Unity ကိုမသုံးပါ။
အလွန်ကောင်းမွန်သောစုစည်းမှုဖြစ်သော်လည်းငါသိသလောက်ဆိုရလျှင် Bardinux သည် Catalonia မှဝေးလံသောဒေသမဟုတ်ဘဲ La Laguna တက္ကသိုလ်မှတီထွင်ခဲ့သော Canary Islands မှ Tenerife မှဖြစ်သည်။
guadalinex edu 10.04: 'D
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Max 8 ကို install လုပ်ပြီး Windows 10 ကိုလည်း install ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ ငါလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားပြီ၊ ငါ့ကိုကူညီတဲ့သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Manuel Blanco Montero ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ ၁၄ နှစ်ရှိပြီ။ Linux = Made> Spain တွင်လက်ရှိငါ Max Linux 14 « VENEZUELA »မှချီးမြှင့်သောအရည်အသွေးကိုမြင့်မားသော LINUX & SOFTWARELIBRE တိုးတက်စေရန်သုံးသည်။
Manuel Blanco Montero အားပြန်ပြောပါ